नर्कदेखिको चिच्याहट | काव्यालय
नर्कदेखिको चिच्याहट | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
म मख्ख छु कि मेरा दाइ अमेरिका छ्न्, विदेशमा छ्न् । खुब माया गर्छ्न् मलाई सायद, त्यति माया त गर्दिन क्या दाइलाई मैले तर पनि मेसो मिल्नेबित्तिकै ‘मेरो दाजी ! के छ, खबर ? सन्चै होइसिन्छ ? काम कस्तो चलिरा’छ?’ भनी सोधिरहन्छु । ‘सब ठिकै छ प्यारा यता…. बरु भन न उताको के छ हल्लीचल्ली” सधैँ यहि उत्तर आउने गर्थ्यो उताबाट । म सोच्ने गर्थेँ, ‘किन मेरा दाइ, आफ्नो सबै खबर ठिकै छ भनी यताको बेलिबिस्तार सोधिरहन्छ्न्..?’
आमाले औषधी खाइन खाइनन् ?
बुवालाई दमले कत्तिको अत्ताएको छ आजकल ?
कान्छाको पढाइ कस्तो चलिरा’छ ?
बियाँ-वस्तु कति छ्न् ?
दुहुनो छ कि नाई ?
घरको ठिटो छोरो भनेको तैँ होस्, कान्छा सानै छ, कुरा अल्लि बुझ्दैन, आमा बुवाको ख्याल गर्नु । विदेशमा आउन पर्या छैन, उतै केही गर्नु, सानै भएपनि पेशा गर्नु । बरु साथीहरुसँग भनेर भएपनि पैसा जोहो गरौँला चिन्ता नलिगे ! दाइबाट यस्ता कुरा बारम्बार आइराख्थे । तर म भने घरबाट पर भाग्न चाहन्थेँ । मेरो मनले विदेशका ठूला ठूला घर, समुन्द्रको किनार अगाडि उभिएर खिस्स परी मुस्कानसहितको तस्बिर खिची फेसबुकका भित्ता सजाउन चाहन्थेँ । सोच्ने गर्थेँ कि, विदेशमा म आफ्नै शैलीमा जिउन पाउँछु । एउटा फरक जीवन हुन्छ त्यहाँ पुग्न पाए, निकै रहरलाग्दो !
बाह्रको परीक्षा सकिनासाथ आएल्ट्स क्लास जोइन गरेँ । न त दाइलाई पत्तो थियो न त घरमै, राम्रो अङ्क आयो दाइले ल्याए भन्दा पनि बेसी । प्रोसेस गर्ने बेला पनि आयो । तर दाइलाई भन्ने आँट आएन, आमालाई भनेँ । सुरुमा आमापनि मान्नुभएको होइन । तर, छोराछोरीको जिद्दीको आगाडि आमाको के लाग्छ र ? आमाले दाइलाई फोन लगाएर भन्न थाल्नुभयो, ‘हेर्न ठुले, माहिलो पनि विदेशा जान्छु भन्छ । राम्रो अङ्क ल्याएछ, तैँले भन्दा पनि बेसी, क्यार्नी हो ?’
जति भनेपनि लाग्दैन..
हिजोदेखि खाना पनि खाको छैन, भन्छ धेरै पैसा कमाएर नयाँ घरमा पाल्छ अरे ।
साहुका ऋण तिर्न तँलाई पनि धौ-धौ नै भा’छ । यता यसले पनि हैरान गराइसक्यो ।
काम अगाडि बढाउन पैसा मागिरा’छ। अस्ति तैँले पठाएको किस्ता तिर्ने पैसा यसलाई दिनपर्ला । किस्ता बरु गाउँघरबाट मिलाउँला ।´
उताबाट दाइ भन्छन्,
‘उसले जिद्दी नै गरिरा’छ भने त के भनौँ र खै..एकपल्ट उसलाई फोन दिनुहोस् त´
म यता नाइँको संकेत दिँदै आमाको अनुहारमा हेर्छु,
`खै बाबु कता गएछ, अघि त यतै थियो..
आमाले मेरो कुरा टाल्न नसकेझैं, दाइले पनि आमाको कुरा टाल्न सकेनन् ।
‘ल ठिकै छ त्यसो भए, मेरो पनि अब ड्युटी सुरु हुन आँट्यो । ऊ त्यसै चाहन्छ भने.. हजुरले भने जस्तै गर्नु न । यता पनि झन काम बढिरा’छ । पैसा पनि अल्लि बेसी नै हुन्छ होला यस महिना । महिना सकिने बित्तिकै पठाउँला म चिन्ता नगर्नु । स्वास्थको ख्याल अर्नु ।’´
यति भनेर दाइ फोन राख्छ्न् । यता म ठूलै युद्ध जितेको अनुभूति गर्छु ।
मोबाइल निकाल्छु, पात्रो हेर्छु र हिसाब गर्छु । विदेश आएको पनि लगभग नौ महिना भैसकेको रहेछ । धेरै कुरा बुझेँ यो अन्तरमा । जीवन बुझेँ, माया बुझेँ, एक्लोपन अनि परिवार बुझेँ । सोचे जस्तो कहाँ हुनेरहेछ र जीवन ? आजकल घोच्ने गर्छ्न् ती विगत सम्झँदा । सबसे बेसी घोच्ने गर्छ आफैले गरेको निर्णय सम्झँदा । दाइ सम्झन्छु … दाइले भनेका ती कुरा सम्झन्छु, उः बेला दाइ किन आफ्नो खबर भन्दैनन् भनी सोच्ने गर्थेँ, आज आपुगेर थाहा भयो, यताको खबर सुनाउने लायकका हुँदैन रहेछन् ।
परदेश भनेको आफ्ना रहरभन्दा परको देश रहेछ । पराईको देश रहेछ परदेश, जहाँ बाबु अनि दाइको प्रेम मिश्रित गाली हैन, साहुको लात मिश्रित गाली मिल्छ । आमाको मायालु पिटाइ हैन यहाँ त कामबाट लखेटाइ मिल्दोरहेछ । परिवारको साथ हैन बरु प्रत्येक पाइलामा झुठा आश मिसिएका बात मिल्छ्न् । माया हैन केहीबेरको छायाँ मिल्छ बस् । यहाँ गाउँका गल्ली हैनन् बाटो बाटोमा बिचल्ली मिल्छ । आफ्ना भन्ने कोही नभएर हो परदेश भनिने । जीवन जिउन निकै कठीन रहेछ, तरपनि जिउन पर्दो रहेछ जसोतसो ।
पीडा, दुख-कष्ट आइरहने रहेछ्न् जीवनमा पाहुना बनी बस् लड्न जान्नु पर्दो रहेछ । जिन्दगीमा सबैभन्दा ठूलो चिज खुशी रहनु रहेछ, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हाँस्न जान्नु पर्दो रहेछ, यहि नै जीवनको सार्थकता रहेछ, विदेशका रङ्गिन बत्तिमा धनसम्पत्ति कमाउन सजिलो होला तर खुशी पाउन निकै कठिन रहेछ । मन खुशी रहेन भने जति नै धन कमाएपनि सबै फिक्का हुँदो रहेछ । ती यादसँगै अघि बढ्न जान्नु नै रहेछ जिन्दगी । आँसुलाई पनि हाँसो बनाउन जान्नु नै रहेछ जिन्दगी ।
दाइका कुरा सँगै म मेरा ती सपना सम्झन्छु । मुस्कुराइरहेको तस्बिर ! अनि नक्कली मुस्कान सहितको, फेसबुकका लागि खिचेको फोटो हेर्छु, आँखा रसाउँछ्न् । यी आँसु बरु मुस्कानभन्दा सक्कली हुने रहेछन् ।
घरको माया आजकल निक्कै लाउँछ, जसलाई भत्काएर नयाँ घर बनाउँला भनेको थिएँ आमासित पहिले । अहिले घरका प्रत्येक कुनाको याद आउँछ । यादमा आउँछ्न् छर-छिमेकी, त्यो मैदान, फाँट, करेसाबारी ! जुन यी आँखाले सुमसुम्याएका थिए । आँखै अघि खेलिरहन्छ्न् ती सब । त्यसैले, यी सबैको खबर सोधिरहेको हुन्छु म कान्छासँग, जसरी दाइले सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो मसित…
`उम कान्छा, सब ठिकै छ यता । बरु भन् न उताको के छ नयाँ-नौलो ? ..´
सबै सन्चै हुनुहुन्छ ?
आमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
आमाबुवाले औषधी बेलैमा खाइराख्नु भा’छ नि ?
धेरै दुख नगर्न भन्नु, गाईवस्तुले दुःख दिएका त छैनन् ?
तेरो पढाइ कस्तो चलिरा’छ नि ?
यस्तै हुन्छ नियमित कुरा मेरा पनि ।
मलाई डर लाग्ने गर्छ बेलाबेला, कतै कान्छोलाई पनि मलाई जस्तै विदेशीने रहर त जाग्ने होइन ? त्यसैले म उसलाई सधैँ सम्झाइरहन्छु…..
a Yell from the Hell